Ndị na-azụ ahịa ọdịnaya dị njikere maka ọgba aghara? | Martech Zone
Na ọhụrụ ọmụmụ nyere ikike site na Kapost site na Aberdeen Group, nyocha choputara ndi ahia ole na ole chere na ha na emeputa ma nyochaa ọdịnaya ha. Na ọdịiche na-erigbu na-apụta n'etiti ndị isi ọdịnaya na ndị na-eso ụzọ ọdịnaya. Kapost na-akpọ oge mgbanwe ebe ọchịchọ dị elu mana atụmatụ amamihe dị ụkọ Ọgba aghara Ọdịnaya. Ha haziri ihe ọmụma dị n’okpuru ebe a iji dina isi ihe mgbochi (na uru) iji guzobe usoro arụmọrụ ọdịnaya.
Ebe anyị niile na-eke ọtụtụ ọdịnaya, ọ na-enye nsogbu na ndị ahịa anaghị eche na ha na-arụpụta ihe zuru oke, na-agbaso ọdịnaya ahụ nke ọma, yana ịdebe ndu sitere na ọdịnaya ahụ.
Tags: ọgba aghara ọdịnayacontent Marketingarụmọrụ ọdịnayammepụta ọdịnayakapostedu ọgbọarụmọrụ nsuso
Nov 1, 2013 na 3:10 AM
Nke a bụ nnukwu ederede Douglas, ee, ị bụ eziokwu! Ndị na-ere ahịa n'ezie nọ na nrụgide iji mepụta ọdịnaya dị ukwuu. Nnukwu ihe ndabere nke ọdịnaya bụ na ọ kwesịrị ịbụ organic, nke mbụ na nke okike.